Skyla vs Mirena: मुख्य भिन्नता र समानताहरू - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कम्पनी चेकआउट समुदाय घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य कल्याण समुदाय, कल्याण कम्पनी समाचार औषधि बनाम मित्र खेलहरु औषधि जानकारी समाचार, कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Skyla vs Mirena: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
Skyla vs Mirena: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
Skyla र Mirena दुई ​​इंट्रायूटरिन उपकरणहरू (IUDs) जुन महिलाको लागि जन्म नियन्त्रणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। आईयूडी साना उपकरणहरू हुन् जुन गर्भाशयमा रहन्छन् र बिस्तारै गर्भावस्था रोक्नको लागि प्रोजेस्टिन हार्मोन रिलीज गर्छन्। दुबै स्काइला र मिरेना लेभोनोरजेस्ट्रेल-रिलीजिंग आईयूडी हुन्। जबकि दुबै आईयूडी एकदम समान छन्, तिनीहरूसँग केहि उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन्।
स्काईला लेभोनोरजेस्ट्रल-रिलीजिंग इंट्राउटरिन प्रणालीको ब्रान्ड नाम हो। यो3बर्ष सम्म गर्भावस्था रोक्न संकेत गरीएको छ। Skyla एक सख्त aseptic प्रविधिको प्रयोग गरी एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा सम्मिलित गर्नु पर्छ।
स्काइला एक T-आकारको उपकरण हो जसले १v..5 मिलीग्राम लेभोनोर्जेस्टल समावेश गर्दछ। लेभोनोर्जेस्ट्रल २ 14 दिन पछि प्रति दिन १ m एमसीजीको अनुमानित दरमा जारी हुन्छ। यो दर rate बर्ष पछि m mcg प्रति दिन मूल दरको आधा भन्दा कममा घट्छ। स्काइला3बर्ष पछि हटाउनुपर्नेछ र बदल्नु पर्छ, यदि चाहानुहुन्छ।
मिरेना लेभोनोर्जेस्ट्रल-रिलीजिंग इंट्राउटरिन प्रणालीको ब्रान्ड नाम पनि हो। Mirena पनि गर्भावस्था रोक्न संकेत गरीएको छ। यद्यपि यो महिलामा मासिक धर्मको भारी रक्तस्रावको उपचारको लागि पनि संकेत दिइन्छ जसले अन्तर्देशीय गर्भनिरोधकलाई आफ्नो गर्भनिरोधको छनोटको रूपमा रुचाउँछन्।
रक्तचाप को लागी म्याग्नेशियम को सबै भन्दा राम्रो रूप
Skyla विपरीत, Mirena5वर्ष सम्म गर्भावस्था रोक्न सक्नुहुन्छ। Mirena लेभोनोर्जेस्ट्रल पनि २० mcg प्रति दिन दरमा जारी गर्दछ। त्यसकारण, मीरेनाले स्काइला भन्दा लामो अवधिको लागि लेभोनोर्जेस्ट्रलको अधिक मात्रा रिलीज गर्‍यो।
स्काइला बनाम मिरेना साइड साइड बाइ साइड तुलना
Skyla र Mirena धेरै समान आईयूडी हो। तिनीहरूको समानता र भिन्नता तल तुलना तालिकामा समीक्षा गर्न सकिन्छ।
एक्ने / सेबोरिया
$ 6060० (प्रति उपकरण)
कुनै दवा कुराकानी रिपोर्ट गरिएको छैन
Kyleena गर्भावस्था कोटि X मा छ र भ्रूण हानी हुन सक्छ। Kyleena गर्भवती महिलाहरुमा contraindication छ।
स्काइला र मिरेना दुई प्रोजेस्टिन रिलीज गर्ने उपकरणहरू हुन् जुन गर्भाशयमा गर्भावस्था रोक्नको लागि घुसाइन्छ। जबकि दुबै आईयूडी एकै प्रोजेस्टिन हार्मोन, लेभोनोरजेस्टल रिलिज गर्छन्, जबकि उनीहरूसँग खुराकको दरमा फरक छ। स्काइलाले १or..5 मिलीग्राम लेभोनोरजेस्ट्रेल समावेश गर्दछ र पहिलो २ days दिन पछि १ m एमसीजी प्रति दिनको कम खुराकमा जारी गर्दछ। मिरेना, अर्कोतर्फ, v२ मिलीग्राम लेभोनोर्जेस्ट्रल समावेश गर्दछ र यसलाई प्रति दिन २० एमसीजीको उच्च दरमा जारी गर्दछ।
दुबै आईयूडीसँग थोरै फरक सations्केतहरू पनि छन्। जबकि स्काईला केवल गर्भावस्था रोक्नको लागि संकेत गरीएको छ, मीरेना गर्भावस्था रोक्नको साथै भारी मासिक रक्तस्रावको उपचार गर्न सक्दछ। तसर्थ, मिरेना ती महिलाहरूमा प्राथमिकता पाउन सकिन्छ जो IUD हरूलाई गर्भनिरोधको छनोटको रूपमा प्रयोग गर्दा भारी अवधि अनुभव गर्दछन्।
दुबै स्काइला र मिरेनाले समान प्रभावहरू र चेतावनीहरू बोक्दछन्। ती दुबैले पेल्भिक इन्फ्लेमेटरी रोग (पीआईडी) र भल्भोभ्यागीनाइटिस जस्ता संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्दछन्। अन्य सम्भावित साइड इफेक्टहरूमा मतली, थकान, र पेट दुखाई समावेश छन्।
के यो सुरक्षित छ pepto गर्भवती हुँदा
कुन आईयूडी तपाईको लागि उत्तम हो भन्ने निर्धारण गर्न तपाईको डाक्टरसँग यो जानकारी छलफल गर्न सिफारिस गरिन्छ।
अंगूर को आहार: कसरी नयाँ र सुधारिएको योजना को पालन गर्न को लागी
Coregasm: के तपाइँ काम गर्न बाट संभोग गर्न सक्नुहुन्छ?
गर्भावस्था को समयमा के मतली औषधि सुरक्षित छ
metformin को लागी ब्रान्ड नाम के हो?
स्याउ साइडर सिरकाले तपाइँको रक्तचाप कम गर्दछ
propranolol 80 मिलीग्राम चिन्ताको लागी ढिलो रिलीज
Zyrtec गर्भावस्था मा लिन को लागी सुरक्षित छ
म खमीर संक्रमण को लागी के प्रयोग गर्न सक्छु